Inkqubo yeMash yeStainless yentsimbi | I-China Inkqubo yeMash ye-Stainless yentsimbi kunye nabaxhasi
I-mashing tun / iketile yenziwe ngentsimbi engenasici okanye ubhedu. 2000L Mash tun sisixhobo esisetyenziswa kwinkqubo yokugungxula ukuguqula isitatshi kwiinkozo ezityumkileyo zibe ziiswekile zokuvundisa.
I-4000L ezine zenqanawa yokusela: umash, itanki lauter, iketile, iWhirlpool
2000L Stainless Brewhouse
Igama Product: 2000L Stainless Brewhouse Ngokuqhelekileyo sisebenzisa ucoceko SS304, SS316 izinto ukwenza ibhiya utywala itanki. Inkqubo ye-1.Mash Inkcazo ye-2000L Mash tun Tuning / kettle yenziwe ngesinyithi. IMash tun yinqanawa esetyenziswa kwinkqubo yokugungxula ukuguqula isitatshi kwiingqolowa ezityumkileyo zaba ziiswekile zokuvundiswa. Itanki ye-2000L ye-Lauter ityhubhu esetyenziselwa ukucoca kunye nokucacisa ulwelo lweswekile (olubizwa ngokuba yi-wort) ngaphandle komxube we-malt oshushu wamanzi (obizwa ngokuba ngumash) ...
1000L Stainless Brewhouse
Ngokwesiqhelo sisebenzisa ucoceko lwe-SS304, i-SS316 ukwenza itanki yokupheka ibhiya.